कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना मोर्चाबन्दी र हवाई यु’द्धको तयारीमा ! - Nepal Insider
Home/समाचार/कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना मोर्चाबन्दी र हवाई यु’द्धको तयारीमा !
1,882 1 minute read
काठमाडौँ । पछिल्लो समय भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको झण्डै ३ सय ७२ वर्ग किलोमिटर भन्दा धेरै भूभाग आफु तिर पारेको छ । जम्मू–कश्मीर औपचारिक रूपमा दुईवटा केन्द्रशासित राज्यमा विभाजित भएसँगै भारतको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेपालको यो क्षेत्रलाई पनि औपचारिक रुपमा आफ्नो बनाएको हो ।
भारतले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रमा हेलिकप्टर गस्ती गर्न थालेको छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) र इन्डो तिब्बतियन बोर्डर पोलिस(आईटीबीपी)को सुरक्षा दस्ता बाक्लो रुपमा तैनाथ गरेको छ । उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढमा केही महिनाअघि मात्रै नैनीसैनी विमानस्थल सञ्चालनको थियो । नेपाल र चीनको सीमानजिकै रहेको यो विमानस्थलमा भारतीय वायु सेनाको लडाकु विमानको नियमित उडान गर्दे आएको छ ।
अतिक्रमित क्षेत्रमा भारतीय सेनाको उपस्थिति मात्रै होइन, मोर्चाबन्दी र हवाई यु द्धको तयारी गरिहेका छन् । पिथौरागढदेखि ९२ किलोमिटर सडकमार्गको दूरीमा रहेको धार्चुलाभन्दा उत्तरतर्फको भूभागमा केही दिन बिराएर लडाकु विमानले गस्ती गर्दे आएको भारतीय पत्रिका हिन्दुस्तान दैनिकले समाचार उल्लेख गरिएको छ । पिथौरागढको नैनीसैनी विमानस्थलबाट १५ किलोमिटरको हवाई रेञ्जमा भारतीय वायुसेनाको लडाकु विमानले उडान गरिरहेको सो समाचार भनिएको छ ।
तर अति क्रमित क्षेत्रभन्दा एक दिनको पैदल दूरीमा रहेको प्रहरी चौकी अहिले त्यो ठाउँ छाडेर झनै वर आएको छ । दार्चुलाको सबैभन्दा उत्तरी क्षेत्रमा तिंकरस्थित छाइलेक प्रहरी चौकी छ । यो प्रहरी चौकीबाट नेपाल भारत विवादित सीमा क्षेत्र कालापानी पुग्न एक दिन पैदल यात्रा गर्नु पर्छ । वि वादित सीमा क्षेत्र कालापानीबाट एक दिनको पैदल दूरी वरै रहेको यो प्रहरी चौकी पनि अहिले खालि भइसकेको छ । नेपालले आफ्नै भूमिमा पनि उपस्थिति भने देखाउन सकेको छैन ।
जाडो सुरु भइसकेको र त्यहाँ बस्न सकिने अवस्था नरहेकाले छाइलेक प्रहरी चौकी अहिले तल झरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जनकारी दिएको छ । प्रहरी अहिले त्यसभन्दा तल छ्याङरु(छाङरु)मा रहेको सीतापुर प्रहरी चौकीमा आएर बसेको छ । तिंकरमा बसोबास गर्ने स्थानीय सबै तल झरेपछि प्रहरीको टोली पनि तल झरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाकाले जनाएको छ । पहिला स्थानीय तल झर्छन्, सबै तल झरेको निश्चित गरेपछि अनि बल्ल प्रहरी पनि छ्याङरुमा रहेको सीतापुर प्रहरी चौकीमा झर्ने गरेको छ ।
ब्यास गाउँपालिकामै पर्ने कालापानीमा अहिले राज्यको उपस्थिति छैन । कालापानीको नेपाली भूभागतर्फ भारतीय सुरक्षाकर्मी क्याम्प नै खडा गरेर बसेका छन् । नेपाली सुरक्षाकर्मी चिसोका कारण तल झर्दै गर्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपाली भूभागमा कब्जा जमाउँदै आइरहेका छन्।
देशभरि माैसम बदली : चिसाे बढ्याे, काठमाडौंको तापक्रम वर्षकै न्यून
आँचल शर्मा थाइल्याण्डमा रमाउदै, भन्छिन्ः निष्फिक्री उड्न चाहन्छु (७ तस्बिरसहित)
अचानक फेरि किन नेपाल आउँदैछिन रविकी पूर्व पत्नी इशा ?
भोलिसहित ३ दिन विद्यालय बन्द
१७० जना यात्रु लिएर सिंगापुर उडेको विमान दुर्घटनाग्रस्त !